Site na ọbịbịa nke ntụle azụmaahịa, nyocha ịntanetị, na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ nkwado ndị ahịa ụlọ ọrụ gị dị ugbu a na aha aha gị na ahụmịhe ndị ahịa gị n'ịntanetị. N'ikwu eziokwu, enweghị mkpa ka mbọ mbọ azụmaahịa gị dị ma ọ bụrụ na ịkwado nkwado na ahụmịhe gị.
N'agbanyeghị afọ ojuju na karịa mgbe ị na-atụ anya ihe ndị ahịa gị na-atụ anya ya.
Ọ bụrụ na azịza maka ihe ndị a niile bụ “ee,” ị ga-alaghachi na mbadamba ịbịaru wee gagharịa na nke gị usoro ọrụ ndị ahịa. Iduzi gị, ka ịghọta “ihe mere” tupu “otú” na anya na ihe na-eme gị ahịa na ịchụsa n'elu ka “ọchịchịrị” n'akụkụ. Lee ihe atụ abụọ nwere ike ime:
Ka counter-intuitive dị ka ọ nwere ike iyi, enwere ihe dị ka ịme "oke" ma a bịa na ọrụ ndị ahịa. Na-agbanye mgbọrọgwụ maka ihe niile 'bara uru,' anyị ghọtara na ọ gaghị ekwe omume ịnye nkwado na ọwa ọ bụla ma ọ bụ ịnọ ebe niile 'n'echiche. Shortdalata nke isi obodo na oke ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ dị ka isi ihe kpatara nke a. Iji mezuo nke ahụ, mgbagha na-ekwu na ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịhọrọ ọwa kwesịrị ekwesị nke nwere uche maka ndị ahịa gị.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, tụgharịa na chanel na-adịghị arụ ọrụ maka gị. Mana nke kachasị, were amara. Okwu na-arụ ọrụ nke ọma. Nke a bụ ndepụta nke usoro ị nwere ike ịme iji jide n'aka na ndị ahịa gị anaghị enwe iwe na afọ ojuju (n'ihi mgbanwe mberede na-apụghị izere ezere nke ga-abịa):
Ptmụta a ọzọ styledị nkwurịta okwu na eziokwu mgbe a bịara n’ịkụziri ndị ahịa ihe banyere ọwa enyemaka dịnụ ha nwere. Iji maa atụ, nke a bụ ihe akara ngosi Kinsta metụtara ndị ahịa ha:
Chee echiche nkwado ndị ahịa dị ka njem ma chọpụta isi ihe dị mkpa na-agwa ndị ahịa banyere mgbanwe ndị e mere na sistemụ nkwado. Ndị a na-agụnye ihe atụ dịka ibugharị ibe ọdịda ọdịda gaa na nnọkọ obodo ebe ndị ahịa nwere ike ịchọta ihe ọhụụ na ihe na-akpali akpali na mmepe na-aga n'ihu nke akara - nkwado ma ọ bụ na uzọ ọzọ.
Takeaway Key: Okwu a na-ekwu, “ihe ka mma” anaghị adịkarị mma ma a bịa n'iji ngwaọrụ iji nye ndị ahịa ọrụ ọhụụ. Mgbe ụfọdụ, nhọrọ ole na ole na-elekwasị anya na-arụ ọrụ ahụ nke ọma na ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịduzi ndị ahịa gị na 'mgbanwe' a na-eme site na nkwukọrịta doro anya ma dị mma na inye nhọrọ nkwado ndị ọzọ.
Ihe atụ 2: Not naghị elekwasị anya “zuru ezu” na Ahụmahụ Nkwado Ndị Ahịa "Bad".
Ihe nke a pụtara bụ na uru ahịa gị ga-agbakwunye gburugburu iji belata nchegbu ndị ahịa kama ịnye atụmatụ mara mma, nke na-abaghị uru.
Site n’echiche onye ahịa, olee etu o si bụrụ “ngwa ngwa” mgbe ọ na-aza? Ọ bụ sekọnd 10, nkeji 5, otu awa, ka ọ bụ otu ụbọchị?
Gbagwojuru anya? Ka anyị were otu ihe atụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na ebe ndị ahịa nwere ike ịrịọ maka nkwado ekwentị, ihe ha chọrọ bụ azịza ọsọ ọsọ. Iji mezuo nke a, a na-atụ aro ka ndị otu nkwado gị na-enweta ọzụzụ nke nwere ike inyere ha aka ịme ngwa ngwa na ịza ajụjụ ndị ahịa.
Ọ na-agwa ndị ahịa ya ihe ọ na-echegbu ya na ozugbo ọ na-agwa ya okwu.
Ọ na-enye ụdị ikike dị ka ha nwere ike ịme ihe ọmụma bara uru (ewepụtara site na nkata nkata ndụ) dị ka omume ịzụ onye ọrụ, mkpesa ndị gara aga, mkpali ndị na-azụ ahịa na atụmanya, wdg ma jiri ya nyefee ọrụ / onyinye ka mma.
Ọ nwere ike ịbụ nnukwu ohere maka ụdị iji merie ntụkwasị obi onye ọrụ site na ndị ahịa na-edenye ahụmịhe dị mma. Dị nwere ike iji ọchị na ihe okike na-echebara nsogbu onye ọrụ echiche! Skyscanner gosipụtara nke a n'ụzọ doro anya na ihe atụ egosiri n'elu.
O gosiputara ikike nke ulo oru igbanwe ma mekwaa ka oge di ike ka idi oru na mgbasa ozi bu ihe di nkpa taa. A nnukwu gbakwunyere dị ka nnyocha site MarketingDive buru amụma na “Ndị dị afọ 25 na n'okpuru ịhọrọ usoro mgbasa ozi dị ka ụzọ kachasị mma ha si agwa ndị ahịa ozi. ”
Ọ nwere ike imebi akara ngosi ma ọ bụrụ na a na-ahụ ọtụtụ post na-adịghị mma na ngalaba ọha dị ka Facebook, Twitter, wdg.
Site n'ịhụ na atụmatụ ahụ anaghị efu ụlọ ọrụ - ego ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Site na ịnye ndị bara uru ọ bụla uru bara uru - na-agbakwunye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị isi obodo niile.
Ejiri ozi a niile, oge eruola ịgagharị n'okwu ahụ ma nyefee ahụmịhe ahịa nke onye nzuzu - nke na-atọ ndị ahịa ụtọ ma na-akụzi ha n'otu oge. In banyela? Anyị chere otú ahụ.